Zimbabwe: We Are On the Brink of Greatness - President - allAfrica.com
ZIMBABWE is on the cusp of greatness with the construction of a new Parliament building being a symbol of the Second Republic's commitment to democracy and the rule of law, President Mnangagwa has said.
This follows his tour on Monday of the new Parliament building which is nearing completion in Mt Hampden, as well as his visit to the site where the memorial statue of the revered Mbuya Nehanda will be hoisted in Harare's central business district.
Posting on micro-blogging platform Twitter yesterday, the President said Zimbabweans must take pride in the country's institutions and assured the nation that in the march forward no one will be left behind.
"Our new Parliament building will be a symbol of our commitment to democracy and the rule of law. Zimbabwe may not be an old democracy but we are proud of our institutions of government and our belief that all Zimbabweans should have a say in the running of our country," said the President.
On the construction of the statue for the iconic First Chimurenga war heroine Mbuya Nehanda, the President, whose Government has pledged to honour more of the country's heroes and heroines through immortalising their legacy in sculpture and history, said it was important to tell the Zimbabwean story for the benefit of both present and future generations.
"The construction of the monument in honour of Mbuya Nehanda is nearing completion. It is vital that we show to our children and grandchildren that Zimbabwe has a rich history of heroes that fought for our freedom," he said.
"Zimbabwe is on the brink of greatness, but we can only achieve it if we fight for it together."